Col, Jabriil Maxamed Yusuf “Halkan waxaan u imid difaaca Puntland”. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Col, Jabriil Maxamed Yusuf “Halkan waxaan u imid difaaca Puntland”.
Col, Jabriil Maxamed Yusuf “Halkan waxaan u imid difaaca Puntland”.
July 8, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe(HM):- Magaaladda Garoowe ee Xarunta Dowladda Puntland waxaa soo gaaray Col,Jibriil Maxamed Yuusuf oo kamid ah masuuliyiinta isu soo taagay xilka Madaxweynaha doorashadda Sanadka 2019 ee Puntland.
Col, Jibriil Maxamed Yuusuf oo kazoo degay garoonka diyaradaha ee Gen,Maxamed Abshir ee Caasimadda Puntland ayaa waxaa soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshadda,sarakiil ciidan,siyaasiyiin & Aqoonyahano iyo shakhsiyad kale.
Jibriil waxaa uu hadal kooban ka jeediyey fagaaraha weyn ee magaaladda (Barxadda) waxaana uu sheegay in Puntland dhidibada loo tagay kadib markii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya,xilligasoo ay si wada jir ah uGu guntadeen Isimada dhaqanka oo kaashanaya Shacabka iyo waxgaradka reer Puntland gudaha & dibada.
Jibriil inkastoo uu hore ugu dhawaaqay inuu yahay musharax,hadana maanta kama uusan hadlin arinta musharaxnimadiisa ,waxaase uu ujeedka socdaalkiisa ku sheegay in ay ugu muhiimsantahay kaqaybqadashadda difaaca dhulka Puntland ” Halkaan waxaan u imid difaaca,difaaca dhulka Puntlandna waa muqadas inoo wada yaal” Col, Jibriil Maxamed Yuusuf.
Col,Jibriil waxaa sheegay in mudada uu joogo uu kulamo la qadandoono bulshada,dowladda,saladiinta dhaqanka iyo qaybaha bulshada rayidka ah ee Puntland.